Itoobiya oo si aan la filayn uga hadashay Shirka Soomaaliya loogu qabanayo London | AllJubbalandnews
Itoobiya oo si aan la filayn uga hadashay Shirka Soomaaliya loogu qabanayo London
MUQDISHO: ─ Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa ka hadlay Maanta Shirka Qaranka ee Somalia loogu qabanayo London, kaasoo si rasmi ah u furmi doona Khamiista berri ah, isagoo sheegay inuu shirkaan ahmiyad u leeyahay Soomaaliya.
Desalegn ayaa hadalkiisa ku daray in natiijada kasoo bixi doonta shirkaas ay wax badan u horseedi doonto xaaladda ay haatan ku sugan tahay Somalia, isagoo intaas ku daray inuu hubo in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llahi Farmaajo uu dhaqan-galin doono qodobada kasoo baxa shirkan.
”Dowlada Soomaaliya waxaan ugu hambalyeynayaa sida isku xirnaanshiyaha leh oo ay u ajiibeen shirka, waxaan rajeyneynaa in Dowladda deriskeenna ah ee Somalia ay si fog uga fiirsan dhaqan galinta miraha kasoo baxa shirka,” ayuu yiri Desalegn.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa intaas ku daray. ”Shirka London ee 2017 wuxuu ka duwan yahay kuwii hore waxaan Saadaalinayaa in Somalia ay gali doonto jawi ka wanaagsan kii hore maadaama shirkaani uu imaaday xilli ay Somalia garatay wadada wanaagsan.”
Sidoo kale, Hailemariam ayaa tilmaamay in shirka London uu albaabbada u furi doono isku soo dhawaanshiyaha Soomaaliya iyo Caalamka, wuxuuna ka saaray meesha in shirka uu noqon doono mid ka hooseeya shirarkii hore.
Desalegn ayaa Madaxda Qaranka iyo kuwa maamul-goboleedayada dalka ugu baaqay inaysan dayicin miraha kasoo bixi doona shirka waxa uuna dhankiisa ka balanqaaday in Ethiopia ay isgarab taagi doonto Somalia.
Ugu dambeyn, Haddalka kasoo yeeray Hailemariam Desalegn ayaa wuxuu imaanaya xili Itoobiya iyo Soomaaliya ay iskala soo gudbeen marxaladihii cakirnaa ee dhanka Siyaasadda.